Qonna harka jaarsaa jiru dargaggootatti naannessuu
Oromiyaan lafa badhaatuufi misooma qonnaatiif mijataa ta'e kan qabduudha. Qonni utubaa dinagdee biyyaa akkuma ta'e Oromiyaanis gahee dinagdee qonnaa irra jireessan kan qooddattuudha. Yeroo ammaa humni qonnaa naannichaa akka dagaaguufi mala qonna naannichaa ceessisuudhaan dinagdee barbaadameef oolchuuf humna namaarratti hojjechuu feesisa.
Dinagdee biyyaa ijaaruu keessatti qonni akkuma gumaacha qabaatu qonna kana ceessisuuf ammoo humni dargaggeessaa murteessaadha. Humna kana misoomsuun dinagdee biyyaa kan utubee jiru damee qonnaarratti ciminaan hojjetamuufi dargaggoota damecharratti bobbaasuun hojii ijoo ta'uu yaa'ii caffee Oromiyaa 7fa tibbana Magaalaa Adaamaatti geggeeffamerrattii pirizidaantiin naannichaa, Obbo Lammaa Magarsaa kan dubbatan.
Gabaasaa raawwii karoora raawwachiiftuu hojii naannichaa kan baatiiwan ja'aa akka dhiyeessanitti qonnaa arfaasaa bara 2009/2010 lafa hektaara kuma 643 ol misoomerraa omishni kuntaala 9.5 kan argame ta'uufi qonna gannaa baranaatiinis omishni kuntaala miliyoona 178.7 ni argama jedhamee eegama jedhu.
Omishaalee qonnarraa bu'aa barbaadame argachuuf humna qonna biyyattii qabee jiru, humni jaarsaa gara harka dargaggeessaatti naanna'uu akka qabuudha kan ibsan. Kunis qonna ceesisuuf teknolojii qofti gahaa akka hintaaneefi humni dargaggeessaa barbaachisaa ta'uu eeru.
Humna dinagdee Oromiyaa jijjiiruu kan danda'u qonnaa ta'uutti kan amanu mootummaan naannichaa, dargaggeessi ammoo sababa hojii dhabdummaatiin rakkoo guddaa keessa seenee kan jiru ta'uu ibsu. Oromiyaa keessa dargaggoonni miliyoonotaan lakka'aman hoji malee taa'aa akka jiran dubbatanii, dargaggoonni kunneen hojjetanii biyyasaanii utuu gargaaranii gaarii waan ta'eef rakkoo dargaggoota miliyoona ja'aa waggaa tokkotti hiikuun hindanda'amu jedhan.
Darggootaaf carraa hojii dameewwan gara garaarratti banuun bal'inaan kan hojjetamaa jiru ta'ee, humni guddaan Oromiyaan qabduufi dinagdee Oromoo jijjiiruu danda'u sadarkaa tokkoffaatti qonna waan ta'ef, qonni kunis harka dargaggootaa galuu akka qabuudha kan ibsan. Qonna kanaaf ammoo teknolojiiwwan xixiqqaa dinagdee qonnaa kan tumsan dhiyaataa jiraachuufi dargaggoonni qonnatti bobba'anii hojjechuu akka qaban hubachiisu.
Qonna ceesisuuf teknolojiiwwan waggaa dhibba hedduu tajaajilanitti gargaaramuun utuu hintaane, teknolojii ammayyaatiin akka gargaaraman gochuuf hojjetaa jiraachuu dubbatan. Teknolojiiwwn murteesoo ta'an galfamaa kan jiraniifi yeroo muraasa booda kan ifooman ta'uus himan.
Inni biraan, rakkoo dhabdummaa hojii furuu kan danda'u qaawwawwan xixiqqoo argaman keessa suuquun furmaanni akka hindhufne tuquun, industiriifi invastimantii babal'isuun rakkoon dhabdummaa hojii waarinaan furamuu akka qabu dubbatan. Kanaaf, dargaggoonni carra argame hundatti gargaramanii hojjechuu akka qaban dubbatu.
“Waa'ee dinagdee qonnaa ijaaruu, industiriifi invastimantii babal'isuu wayita dubbannu, qonaan bulaa lafasaarraa buqqisaa utuu hintaane lafti irratti hinhojjetamne hedduun waan jiraniif isarratti ciminaan hojjechuu qabna” jedhu. Kanaaf dargaggoonnis kutannoodhaan hojiitti seenuu akka qabanillee hubachiisan.
Walumaagalatti, dinagdee biyyaa ijaaruuf qonni murteessaadha. Humna qonna geggeessaa jiru ceesisuun teknolojidhaan deggeruun warraaqsa dinagdee naannichatti eegalame tumsuun murteessaadha. Kanas guddina dinagdee naannichaas ta'e akka biyyattii qabamee socho'amaa jiru milkeessuuf dargaggoonni kutamnnoon hojjechuu qabu.
Torban kana/This_Week 9629
Guyyaa mara/All_Days 1819049